Tahirin-kevitra 📚 - Tily eto Madagasikara
Politika iraisam-pirenena « Aro amin’ny herisetra »
Hodidina Nanomboka teo amin’ny nandraisan’ny Fivoriamben’ny skotisma manerantany ny Fanapahan-kevitra 2002-07 « Arovy amin’ny herisetra sy ny loza ny skoto », ny taona 2002, dia fivoarana maro no efa hita teo anivon’ireo fikambanana Skoto isaky ny firenena (A/OSN) sy teo amin’ny sehatra manerantany izay nahafahana nandray anjara tamin’ny fampandrosoana ny sehatry ny fiarovana ny ankizy sy ny […]
Olon-dehibe sy kalitao, Skotisma Iraisam-pirenena
Ny marika « Ravinala » sy « SCOUTS » (logo)
Mampiasa marika roa samy sarobidy aminy ny skoto Tily eto Madagasikara : ny marika (logo « SCOUTS ») sy faneva (Fleur de lys) an’ny skotisma iraisam-pirenena, mariky ny fiombonana amin’ireo skoto rehetra manerana an’izao tontolo izao. ny marika Ravinala, mariky ny fiombonan’ny skoto Tily rehetra eran’i Madagasikara sy any ampitan-dranomasina. Mariky ny fiombonana ny marika ampiasaintsika, ary […]
Iray amin’ireo sehatra teknika nasionaly mpanapa-kevitra ho an'ny mpanabe eto amin'ny Tily ny FIFITI.
Fombam-pivavahana amin’ny fotoana samihafa
Ireto zaraina ireto misy tondrozotra fandrafetana ny fotoam-pivavahana amin’ny karazam-potoana samihafa mety hiainan’ny Tily any am-pivondronana na eny anivon’ny Faritany, indrindra raha hetsika iraisam-pinoana iarahana sinodam-piangonana maromaro. Fanombohana sahan’asa (fivoriana, fivoahana an-tsaha, sns, …) Fanombohana Fiderana : Salamo Hira Vavaka + « Rainay izay any an-danitra…. » Tenin’Andriamanitra Vakiteny + hafatra (…) Vavaka (miompana amin’ny atrik’asa) Famaranana Hira […]
← Lahatsoratra vaovao1 2 … 6 Lahatsoratra taloha →